Hal qof oo haraad dartiis ugu geeriyooday gudaha gobolka Nugaal - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHal qof oo haraad dartiis ugu geeriyooday gudaha gobolka Nugaal
Xilli roobaadkii Deyrta oo aan si fiican u da’in ayaa sababay abaarta. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal qof ayaa haraad dartiis ugu geeriyooday deegaan miyi ah oo hoostaga tuulada Godob-jiiraan ee gobolka Nugaal, sida uu sheegay qof xoolo-dhaqato ah.
Isaga oo la hadlayay warbaahinta maxaliga ah, mid kamid ah xoolo-dhaqatada ayaa sheegay in dhimashadaas ay ka dhacday halkaas asbuucii lasoo dhaafay.
“Waxa uu ahaa wiil yar oo 10-sanno jir ah, waxa uu u dhintay haraad dartiis,” ayuu yiri qofka xoolo-dhaqatada ah.
“Xaalada waa mid aad u khatar badan, haddii aanan helin caawimaad sida ugu macquulsan, dad badan baa khatar ugu jira in ay naftooda waayaan.” Ayuu ku daray.
Gudaha Puntland, abaarta daran ayaa saamaysay in ka badan 1.5 milyan oo xoolo-dhaqato ah, sida ay sheegtay haayada arrimaha bini’aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka Puntland u qaabilsan ee HADMA.